မိမိ ကိုယ်တိုင်လည်း ဖတ်ဖြစ်အောင်၊ ဖတ်ချင်သူများလည်း ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ဝေမျှလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။
ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ - UploadaDocument to Scribd
မူရင်း Upload Site တွင် ဖတ်ရှုလိုပါက ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။
Filed Under : Arakan, Ebook, Rakhine, Sharing
ဒါက မြနန္ဒာ ကဗျာပေါ့
ကျောင်းတုံးက (အခြေခံပညာ ကျောင်းတုံးက ပါ...) ဆံပင်တို ဂုတ်ဝဲလေးတွေကို ကြည့်ရင်း စပ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေးက.....
ငယ်ငယ်က ရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာလေး အမှတ်တရ အဖြစ် ဘလော့ပေါ် တင်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။
Download လုပ်ရန် ပုံပေါ်တွင် Click လုပ်ပါရန်။
၀ါဆို သင်္ကန်းဆက်ကပ်လှုဒါန်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
Dear Dakagyi and Dakamagyi
You are invited to attend Waso Robe offering ceremony at Mahamuni Buddhist Temple. Please check detail information of our schedule.
Ven. Dr Vicitta
ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင် အပေါင်းတို့ ခင်ဗျား.....
စင်္ကာပူ နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Mahamuni Buddhist Society မှာ ယခုလ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၈နာရီခွဲ အချိန် သံဃာတော်များကို ၀ါဆို သင်္ကန်း ဆက်ကပ် လှုဒါန်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါဝင်လှုဒါန်း လိုသူများ သိရှိစေနိုင်ဖို့ နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော် လိုက်ရပါကြောင်း။
Mahamuni Buddhist Society တည်ရှိရာ နေရာကတော့
23A Jalan Mas Puteh
Tel: (65) 6777 7018 ဖြစ်ပြီး
လမ်းညွှန်ကတော့ Clementi MRT Station ကနေပြီး၊Service Number 78 ဒါမှ မဟုတ် 285 ကားစီးမယ်ဆိုရင် ၃ မှတ်တိုင်မြောက်မှာ ဆင်းရင် ရောက်ရှိပါကြောင်း နိဗ္ဗာန် အကျိုးမျှော်၍ နှိုးဆော် လိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
Read this document on Scribd: Waso Robe Donation Ceremony